I-China Manual Swing Door yesicelo seSibhedlele yodwa evulekileyo iminyango yokujongwa kwemilo ebhalwe ngesandla enealuminiyamu yensimbi yeplate ye10years abavelisi kunye nabathengisi | Moenke
Umnyango oZenzekelayo woMoya weSibhedlele
Umnyango wencwadana yesibhedlele
Umnyango weSwing oZenzekelayo weSicelo seSibhedlele esisodwa esivulekileyo kwizinga eliphezulu lokujikeleza iminyango ene-aluminium alloy ipleyiti yewaranti eyi-10years
Sibonelela ngoSwining Door woNyango lweSicelo seSibhedlele esisodwa esivulekileyo kwizinga eliphezulu lokujikeleza iminyango ene-aluminium alloy ipleyiti yewaranti eyi-10years, sizinikele kwiminyango yentsimbi iminyaka emininzi, egubungela uninzi lweemarike zaseYurophu nezaseMelika, sisenza into yokuba liqabane lakho lexesha elide eTshayina. .
Igama Umnyango weSwining Manual weSicelo seSibhedlele esivulekileyo
Indawo yokuQala Shandong, China (Mainland)
Cacisa ubungakanani 900 * 2100
Icwecwe loMnyango Sheet intsimbi kwalenza, umgubo wawutyabeka
Isakhelo soMnyango Alu ingxubevange, umgubo wawutyabeka
Umbala womgangatho Powder ukutyabeka organge
Izinto ezingundoqo Iphepha lobusi
Umnyango oqinileyo 40mm
Jonga ifestile 400 * 400
Kick Plate 0.8MM SS304
Izixhobo Iihenjisi SS304, SS304 lever isiphatho kunye lockset
1.Umnyango uvela kukhuthazo lwabaqulunqi abaziingcali, uyilo olwahlukeneyo lokuhlangabezana neemfuno ezizodwa ezizezakho ezivela kubathengi bethu, ngakumbi iiwadi zokulala, isango lenkunkuma, amagumbi ancedisayo, iiofisi, njl.
2. Iifreyimu ezahlukileyo zodonga ziyafumaneka, kunye nesicamba esine-high-intensive seyber seal ukuhlangabezana neemfuno zempilo.
3. Ucango lomnyango lwenziwe ngealuminium alloy frame kunye nocango lwentsimbi, ngaphakathi izinto ezingundoqo zinokuba yialuminium ingxubevange yobusi okanye polyurethane amagwebu, isinki yerabha etyibilikayo enokufakwa emazantsi omnyango.
4.Ukutshixa umnyango, ukufutshane emnyango, intwasahlobo yomgangatho okanye ezinye izinto ezikhoyo.
5. Ukuveliswa kokuchanekileyo kwezinto zokuthenga ukuya kwinkqubo yokuvelisa kude kube nezixhobo zehardware ukuqinisekisa iimveliso ezisemgangathweni kunye nokwandisa imveliso ixesha elide.
6. Izixhobo ezikumgangatho ophezulu zehardware, ukubukeka okuhle kunye nokusebenza okuthembekileyo.
Umzobo weDesign yeMveliso
Isakhelo sokuTywina iSakhelo
Isakhelo se-aluminium eyi-1.2mm.
5mm + 5mm Double Wobulali Glass,I-seamless kunye ne-antifogging.
Iiphaneli zobusi zeAluminiyam ezikhuselekileyo, Ukumelana nomlilo, ukumelana neBocteria, ukuhlala emanzini kunye nokuPhepha kweMitha.
Umgangatho ophezulu wokuvula
1. Izinto ozifunayo ziya kuba yimpendulo zingaphelanga iiyure eziyi-12.
2. Iqela le-Srtong Moenke linokubonelela ngeentlobo zoyilo ukuhlangabezana neemfuno zakho.
3. Ukuhanjiswa okukhawulezayo, umhla wokuhanjiswa kweesampulu kwiintsuku eziyi-1-3. Uku-oda ngobuninzi ngeentsuku ezisixhenxe.
4. Iinkonzo ze-OEM / i-ODM, ukupakisha kwabathengi kunye noyilo lweLogo ziyakwamkeleka.
5. Ukukhuselwa kweemarike, intsalela kunye nazo zonke iinkcukacha zabucala.
Q: Lurhwebo lwamanye amazwe. Ndingayikhusela njani inzala yam okanye ndiyithembe inkampani yakho?
A: I-Moenke ngumnikezeli wegolide ongaphezulu kwe-10years e-China. UMoenke upasile i-ISO9001: 2015 kwisatifikethi senkqubo esemgangathweni.
Q: Ngaba ungumenzi okanye inkampani yorhwebo?
IMoenke yindawo yokwenziwa kweminyango yesibhedlele ebekwe eShandong China. Wamkelekile undwendwela umzi-mveliso wethu.
Q: Kuthekani ngeephakeji zakho?
A: Iphakheji yethu yeepelethi zomthi, sikwamkela i-OEM.
Q: Olu lucango lwam lokuqala lokungenisa elizenzekelayo, andazi ukuba ndingenisa njani?
A: Ungakhathazeki, uMoenke uneminyaka eli-10 ekuthumeleni kwelinye ilizwe. Sinokukunceda ukonga ixesha kunye nemali yakho zombini.
Q: Ngaba ungabonelela ngesampulu yokuvavanya umgangatho?
A: Ewe, isampuli iyafumaneka. Kodwa umthengi oqhelekileyo uya kuba nakho ukuhlawulela iindleko zokubonisa kunye nentlawulo yesampulu.
Egqithileyo Umnyango weSwing weSicelo seSibhedlele esinye nesiqingatha esivulekileyo soMgangatho oPhezulu weSwining Doors ngeAluminium Alloy Plate yee-10years Warranty
Okulandelayo: Isibhedlele esiSebenzayo seZibhedlele eziVulekileyo eziVulekileyo zoMgangatho oPhezulu woQinisekiso oluVulekileyo loMoya oLujikelezayo ngeAluminium yeAlloy Plate ye-10years Warranty
Manual X-RAY izibhedlele ukusebenza iingcango qual ...
Umnyango weSwing weSicelo seSibhedlele esinye ...
Umnyango ojikelezayo weSango leSicelo seSibhedlele ...
Umnyango weSwing weSicelo seSibhedlele u ...
Ukutyibilika kwesango lokuSebenza kweSibhedlele ...
Umnyango weSwing weSicelo seSibhedlele u-Sing ...
Shandong Moenke Door Industry Co., Ltd.Ukuthengiswa kweShishini: